MIUI 12: Mara akụkọ ya niile na ekwentị ga - enweta ya | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Noticias, Xiaomi
Mgbe ọtụtụ nkwụsị, Xiaomi ekwenyela usoro nke iri na abụọ nke usoro eji eme ihe na njedebe ya. Firmlọ ọrụ China emeela ka ọ bụrụ onye ọrụ, na-aga n'ihu ya akụkọ na-esote MIUI 12, a software ugbu a na a pụtara eto eto afọ tupu maturation na ikpeazụ tọhapụ.
Ekwentị ndị mbụ ga-anụ ụtọ ụdị a ga-abụ ngwaọrụ ndị China, mgbe oge na-aga, ha ga-ebupụta ya na mpaghara ndị ọzọ n'ụzọ na-arịwanye elu. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ mgbe ochie nke MIUI 12 bụ na ọ mara mma karịa ma tinye mmegharị mmegharị.
1 Ihe ngosi mara mma na ihe ngosi ohuru
2 Nche na nzuzo na-aga ụkwụ na ụkwụ
3 Ihe omimi ohuru
4 Nhọrọ ahụike ọhụrụ
5 Ozi ndị ọzọ nke MIUI 12
6 Ekwentị mbụ na-enweta mmelite ahụ
Ihe ngosi mara mma na ihe ngosi ohuru
Na oyi akwa a na mma na onye ọ bụla version nọmba, na mbipute 12 ọ na-agaghị na-erughị, karịsịa mma na anya nke ọ bụla onye ọrụ. A nụchara anụ ahụ dị mma iji nweta desktọpụ doro anya doro anya, ihe ngosi ọhụụ na usoro ezi uche ọhụụ ndị onye ọrụ họọrọ.
Ihe ngosi a gafere site na mkpọghe nke Xiaomi, mmetụta nke ngwa dị ka ihu igwe gụnyere nke ndabara na MIUI. Ndị mmepe ahụ alaghị azụ iji meziwanye ihe nkiri ahụ, na-enye ya nnukwu ọhụụ na karịa ihe niile ha nwere iji, site na nke a, ihu ga-erite uru ma nweta ume ọhụrụ.
MIUI 12 Ọ na-egosikwa na peeji nkwado ahụ na emelitere oge n'etiti ngwa dị na ihu na nloghachi na desktọọpụ, yana ngwa ọ bụla na-emeghe na-aga n'okirikiri. The ndịna usoro ugbu a na-enye a ukwuu ngwa ngwa fluidity na ihe niile na-eme site na-enwe a pụtara ìhè gburugburu ebe obibi.
Nche na nzuzo na-aga ụkwụ na ụkwụ
Ndị ọrụ na-ajụkarị site na nnọkọ gọọmentị maka mmelite na nzuzo, nke kpatara Xiaomi chọrọ iji mesie okwu a ike. MIUI 12 nwere ikike ikike ugbu a n’ime ihe niile ngwa ọ bụla rịọrọ, ma ọ bụ n’ihu ma ọ bụ n’azụ, a ga-enwe akụkọ zuru oke.
MIUI 12 ga-etinye ọnọdụ nkpuchikwa amara dị ka mkpuchi nkpuchi. Ọ bụ ọnọdụ incognito nke anyị nwere ike iji ama ama anyị na-enweghị ngwa ọ bụla na-arịọ ozi n'aka anyị. Ozugbo etinyere akụkọ ihe mere eme na mbụ, ị gaghị enwe ike ịchọpụta ozi anyị ọ bụla, ọ bụ nhọrọ iji rụọ ọrụ nwayọ na enweghị ụjọ.
Ihe ọhụrụ Xiaomi oyi akwa ga-enwe ikikere nke ngwa ọ bụla ma họrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu ojiji ma ọ bụ ọtụtụ dabere na ọ bụ ngwa ị na-ejikarị eme ihe mgbe niile. Ikike nke igwefoto, igwe okwu, ndekọ ma ọ bụ kọntaktị enweghị ike iji ya rụọ ọrụ na ngwa ọ bụla.
Ihe omimi ohuru
N'ezie, ọ bụ otu n'ime akụkụ ndị anyị na-arụ ọrụ mgbe niile iji nwee ike inye ndị ọrụ nke Xiaomi ọnụahịa dị iche na ndị ọzọ. Ke akpa oyiyi i nwere ike ịhụ ohere ndabere, na ike na akwụkwọ ahụ aja nke Earth na Mars, ndị ọzọ dị iche iche ndị ndị glaciers ndị dị nnọọ ka ike.
MIUI 12 nwere mmetụta na nghọta ndị ọzọ, ihe ngosi ohuru mgbe iwepu ngwa site na bulite ya na elu aka nri na ndị ọzọ dị iche iche dabere na ihe ị na-eji ekwentị. MALM, FOLME na MiRender ga-anọgide na-abụ ihe atụ, mmegharị na ntụgharị igwe, ugbu a ha nwere ụdị ahaziri ahazi.
Nhọrọ ahụike ọhụrụ
Xiaomi achoghi ichefu banyere ngwa HealthSite na ndabara, ekwentị ahụ ga-ezuru idekọ ụra site na ịgbakwunye algorithms ọhụrụ, mana ọ na-aga n'ihu site na ịdekọ oge anyị na-ekwu, nrọ na snoring anyị. Ndị a ga-echekwa na folda dị n'ime sistemụ dị n'ime.
Ngwa ahụike ahụ ga-atụle usoro ụbọchị kwa ụbọchị, niile tụrụ na izi ezi. Ikwesighi ibudata ngwa di na mpụga site na Storelọ Ahịa Play. Ọ nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ nke a ga-akọwacha ozugbo a tọhapụrụ ya n'ụzọ doro anya ma kwụsie ike.
Ozi ndị ọzọ nke MIUI 12
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị enweghị ike ịla, ọ ga-agwakọta ma kwụsị otu oge anyị nwetara mmelite, mana enwere ike rụọ ọrụ ya na nhọrọ Ntọala. N'etiti akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ bụ ịmegharị windo na-ese n'elu mmiri, AI (Artificial Intelligence) njikarịcha, ọnọdụ egwuregwu ka mma mgbe ị na-edekọ na ihuenyo na ngwa niile na-enweta mmelite kachasị.
Ekwentị mbụ na-enweta mmelite ahụ
Site na June ekwentị izizi iji nweta mmelite ahụ Ha bụ: Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Pro, Redmi K30, Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro na Redmi K20.
Nke abụọ iji nata mmelite ahụ ga - abụ maka ekwentị ndị a: Mpempe akwụkwọ mkpịsị aka, Xiaomi Mi 7 SE, Xiaomi CC7 Pro, Xiaomi CC8, Xiaomi Mix 8S na Xiaomi Mi Mix 8.
Agba nke atọ nke mmelite Nke a bụ maka igwe: 8, Xiaomi Redmi 9 Pro, Xiaomi Redmi 2a, Xiaomi Redmi Rịba ama 3, Xiaomi Mi 3X na Xiaomi Mi 5.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MIUI 12: Mara ozi ya niile na ekwentị ga-enweta ya
Akpa Galaxy Buds na-emelite na-enweta njirimara nke Buds +